ANDROID ပေါ်မှာဘာသာစကားပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို - အန်းဒရွိုက် - 2019
အန်းဒရွိုက်အတွက် interface ကိုဘာသာစကားပြောင်းခြင်း
မကြာသေးမီကအလွန်ရေပန်းစားပြည်ပမှာစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet များဝယ်ယူကြသည် - AliExpress, eBay သို့မဟုတ်အခြားကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။ အမြဲတမ်း CIS စျေးကွက်အတွက်လက်မှတ်ရ devices များရောင်းသူမပေး - သူတို့ကရုရှားဘာသာစကားပယ်ဖြစ်သော firmware ကို, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်တွင်ကျနော်တို့ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ပြုရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
Android ပေါ်မှာ devayse အတွက်ရုရှားဘာသာစကား Set
အန်းဒရွိုက်ကိရိယာရုရှားဘာသာစကား, တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားမှအများစုမှာ firmware ကိုတစ်ဦးလည်းမရှိ - ဤအတွက် default အနေဖြင့်တစ်ဦးသက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာစကားအထုပ်လည်းမရှိ, ကသာကိုသက်ဝင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
Method ကို 1: System ကိုချိန်ညှိမှုများ
များသောအားဖြင့်ရုရှားဘာသာစကားမှာဝယ်ယူစည်းကမ်း, ပြည်ပမှာစမတ်ဖုန်း default အနေဖြင့်မတပ်ဆင်ရသေးအတိုင်း, သင်မူကားထိုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် - ဤ version ကိုအများဆုံးကိစ္စများတွင်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
devaysa settings ကိုသွားပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို default အနေဖြင့် enabled လျှင်ဥပမာအားဖြင့်တရုတ်, ထို့နောက်ပဲ့ထိန်းအိုင်ကွန်ဥပမာ - အဘို့, "Settings" ကို (« Settings များ») လျှောက်လွှာ menu ကိုခုနှစ်တွင်တစ်ဂီယာနဲ့တူလှပါတယ်။
တောင်မှလွယ်ကူစေရန် - ကိုသွား "Settings" ကို အခြေအနေကိုလိုင်းကနေတစ်ဆင့်။
ထို့နောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးပွိုင့်လိုအပ်ပါတယ် "ဘာသာစကား & input ကို"ဒါ့အပြင်သူက "ဘာသာစကားများနှင့် input ကို"။ အန်းဒရွိုက် 5.0 နှင့်အတူကို Samsung စမတ်ဖုန်းအဘို့အကနဲ့တူလှပါတယ်။
အခြား devices တွင်, အိုင်ကွန်ကမ္ဘာလုံးတစ်ခုသိထားကိုယ်စားပြုမှုနဲ့တူလှပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ထိပ်ဆုံးအမှတ်ကိုလိုအပ် - သူ "ဘာသာစကား" သို့မဟုတ် "ဘာသာစကား".
ဒီ option ကတက်ကြွစွာ devices များဘာသာစကားများသင့်ရဲ့စာရင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရုရှားကို select လုပ်ပါခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ရန် "ဘာသာစကားတစ်ခုကို Add" (မဟုတ်ရင် "ဘာသာစကား Add") အောက်ခြေတွင် - ကသင်္ကေတနှင့်အတူ icon တစ်ခုဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ် "+".
တစ်ဦးက menu ကဘာသာစကားများတစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
စာရင်းများတွင်နေရာချထား "ရုရှား" နှင့်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပလ္လင် tapnite ။ စမတ်ဖုန်း interface ကို russify စေရန်, ရိုးရှင်းစွာတပ်မက်လိုချင်သောဘာသာစကားအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါတက်ကြွစွာစာရင်းထဲတွင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ - ကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ သို့သော်ရုရှရရှိနိုင်ဘာသာစကားများကြားတွင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာအခြေအနေကိုအဲဒီမှာဖြစ်နိုင်သည်။ စက်တပ်ဆင်ထားသည်တဲ့အခါဒီ firmware ကိုဖြစ်ပျက်, အထူးသဖြင့်အတွင်း CIS နှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအောက်ပါနည်းလမ်းအားဖြင့် russify နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: MoreLocale2
application များနှင့်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်-console ၏ပေါင်းစပ်သင်တစ်ဦးကလက်ခံ firmware ကိုရုရှားကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
MoreLocale2 ကို download လုပ်ပါ
ADB က download လုပ်ပါ
လျှောက်လွှာ Install လုပ်ပါ။ သငျသညျအမြစ်-access ကိုရှိပါက - အပေါ်ကိုဖတ် -7အဆင့်ဆိုပါကမကိုကျော်သွား။
ဒီဘာဂ် mode ကို USB မှတ် Enable - ကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းများအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အသေးစိတ်: Android ပေါ်မှာက USB ဒီဘာဂင် mode ကို enable ရန်
အခုတော့ PC ကိုသွားပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆို ADB ကအတူ archive ကိုအထုပ်များနှင့် drive ကို C. ၏အမြစ်ဖို့ရရှိလာတဲ့ folder ကိုရွှေ့
(Windows7နည်းလမ်းများ Windows 8, Windows 10) command line ကို run နှင့် command ကိုရိုက်ထည့်ပါcd c: adb.
console ကိုပိတ်ပြီးမရှိရင်ကို USB-cable ကိုကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာသင့်ရဲ့ Android-device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ device ကိုစနစ်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့လိုင်းပေါ်ဒီ command စစ်ဆေးadb devices များ။ အဆိုပါစနစ်အ device ကို display ကိုဖော်ပြရန်သငျ့သညျ။
ဆင့်ကဲအောက်ပါ command များရိုက်ထည့်ပါ:
ညနေစာရင်း packages များ morelocale
ညနေထောက်ပံ့ငွေ jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
ဒီဤကဲ့သို့သောရှာဖွေသင့်ပါတယ်သည့်အခါ Prompt ကိုပြတင်းပေါက်ဆင့်ဆို:
သငျသညျယခု PC ကိုကနေ device ကို disconnect နိုင်ပါတယ်။
ကိရိယာ MoreLocale2 အပေါ်ကိုဖွင့်ပြီးအောက်မှာကြည့်ရှု "ရုရှား" («ရုရှား») ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်ပလ္လင် Tapnite ။
Done - ယခုသင့်ရဲ့ device Russified ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနည်းလမ်းကိုသို့သော်အတော်လေးခက်ခဲသည်, ထိုသို့ရလဒ်များကိုအာမမခံနိုင်ပေ - ပြီးတော့သင်ကတစိတ်တပိုင်း Russification သို့မဟုတ်နည်းလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးခံယူမည်ဟုအထုပ် software တွေကနေ block လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါလျှင်, မှာအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ADB နှင့် MoreLocale2 အတူ method ကိုမကူညီခဲ့ဘူးလျှင်ဤပြဿနာတစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ကို software ကို "လေးထောငျ့ကှကျထဲက" ဟုအဆိုပါ Russified install တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသွားရောက်ဖြစ်ပါသည်: သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေအဘို့သင့်ကိုကူညီမယ့်စည်းမျဉ်းအဖြစ်၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကိုဆန္ဒရှိ။
ကျနော်တို့ကဖုန်းထဲတွင်ရုရှားဘာသာစကားတပ်ဆင်ရန်မရရှိနိုင်ပါအပေါငျးတို့သ options များကြည့်ရှု။ သင်သည်မည်သည့်ထက်ပိုလိမ္မာပါးနပ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုသိလျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမျှဝေပါ။